किन हुन सकेन सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
किन हुन सकेन सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन?
गोकुल जोशी महेन्द्रनगर पुस ६
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुसम्म पुग्ने विदेशी पर्यटकको संख्या शून्य जस्तै रहेको पाइएको छ। पश्चिमी सिमा नाका गड्डाचौकी हुँदै नेपाल भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु यहाँ रहेका पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न नसकेको पाइएको हो।
कञ्चनपुरको नाका गड्डाचौकी भएर वर्षेनी हजारौँको संख्यामा तेस्रो देशका पर्यटकहरु नेपाल भित्रिन्छन् । तर उनीहरुलाई सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा रहेका प्र्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपुर्ण क्षेत्रमा पुर्याउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएपनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुको रोजाईमा यहाँका पर्यटकीय स्थलहरु पर्न नसकेका हुन्।
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपुर्ण धर्तिको स्वर्गका रुपमा रहेको खप्तड क्षेत्र, एसियाकै दोस्रो ठुलो दोधारा–झोलुङ्गे, अपि हिमाल, सैपाल हिमाल, पताल भुमेश्वर, सुर्मा सरोवर, उग्रतारा मन्दिर, बेदकोट ताल, घोडाघोडी ताल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाह्रसिंगेको झुण्ड यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक बिकटताले सोचे जति पर्यटक त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका खप्तड क्षेत्र, अपि नाम्पा, सैपाल हिमाल, सुर्मासरोवरसम्म पुग्ने पर्यटकको संख्या निकै कम छ।
भौगोलिक बिकटता तथा यातायाताको असुविधाका कारण पर्यटक ति ठाउँसम्म पुग्न नसकिरहेका पर्यटन व्यवसायी करबिर सिँह धामी बताउँछन्। पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार नहँुदा पनि पर्यटकहरुलाई जानकारी नहुँदा त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाई छ। यहाँका पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्न सके विदेशी पर्यटक सजिलै भित्रिने सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ।
सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले देशमा पर्यटकीय गतिविधि बढेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारका लागि उल्लेख्य प्रयास नै नभएकै र सोही कारण विदेशी पर्यटक यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्न नसकेका पर्यटन व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिने पर्यटक बढे
पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकी हुँदै नेपाल भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष गड्डाचौकी नाकाबाट भारत हुँदै नेपाल भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुको संख्यामा बृद्धि भएको अध्यागन कार्यालय गड्डाचौकीले जनाएको छ।
अध्यागन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ११ महिनाको अवधिमा गड्डाचौकी नाका भएर २ हजार ७ सय ६८ जना विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिएका छन्। यस वर्षको डिसेम्बर महिनाको हालसम्म ९६ जना सीमा भित्रिएको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष २ हजार ७ सय ४५ जना आएका थिए।
पश्चिमी सीमानाकाबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुमा अमेरिका, इटाली, अष्ट्रेलिया, इजरायल र जर्मनीका धेरै रहेको अध्यागमन अधिकृत पदमराज भट्टले बताए। सबैभन्दा बढी अमेरिकाका पर्यटकहरु गड्डाचौकी नाका भएर नेपाल भित्रिने गरेका उनले बताए।
उनका अनुसार यस वर्षको हालसम्म ३ सय ६ जना अमेरिकी पर्यटक नेपालको पर्यटकिय क्षेत्रको अवलोकनका लागि पुगेका छन्। महिलाहरु भन्दा पनि पुुरुष पर्यटकहरु तुलनात्मक रुपमा धेरै आउने गर्दछन्। यहाँबाट भित्रिने पर्यटकहरु काठमाडौँ, पोखरा र बर्दियाका लागि जाने गरेको छन्।
गड्डाचौकी नेपाल भित्रिने पर्यटकका लागि पश्चिमको एक ठुलो नाका हो। यहाँबाट आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुको रोजाईमा सुदूपश्चिम पर्न नसकेको अध्यागमन अधिकृत पदमराज भट्टले बताए।
उनका अनुसार प्रचार प्रसारका लागि उल्लेख्य प्रयास नभएकै कारण विदेशी पर्यटक यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्। गड्डाचौकीबाट आउने पर्यटकमध्ये महिनाको १/२ जनाले मात्र यहाँको पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्ने उनले बताए। ‘कहिले काँही महिनाको १÷२ जना महेन्द्रनगर बास बस्ने गरेर आए नजिक कुनै घुम्न लायक ठाँउ छ र भनेर सोध्ने गर्छन्, त्यस बाहेक केही जानकारी माग्दैनन्’ उनले भने।
उता कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर आउने पर्यटकको संख्यामा पनि बृृद्धि भएको छ। तर उनीहरु पनि देशका अन्य स्थानमा घुम्नका लागि गएपनि सुदुरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा पुर्याउन सकिएको छैन्।
अध्यागमन कार्यालय कैलालीका अध्यागमन अधिकृत ओमकार शाहले यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य बारे जानकारी नहुँदा पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको बताए।
अधिकारीहरुका अनुसार कञ्चनपुरको शुँक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्ने विदेशी पर्यटकको संख्या विगतको तुलनामा बृृद्धि भएपनि त्यो संख्या अत्यन्तै न्युन छ। एक वर्षमा झण्डै ३ हजार पर्यटक शुक्लाफाँटामा घुमेकोमा त्यसमा झण्डै ६० जना मात्रै विदेशी पर्यटकहरु रहेका छन्। यहाँका अन्य पर्यटकीय स्थलको तुलनामा शुक्लाफाँटा प्रचार प्रसारमा आएको र राजमार्गबाट नजिक भएका कारण विदेशी पर्यटकको संंख्या बढेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।
सरकारी स्तरबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि खासै पहल हुन सकेको छैन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले कञ्चनपुरमा २०६१ सालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरेपनि पर्यटन सम्बन्धीका गतिविधि गरेको देखिदैन। सूचना केन्द्रलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार नदिइएको पर्यटन बोर्ड कञ्चनपुर सूचना केन्द्रका प्रमुख थानेश्वर लेखकले बताए।
प्रकाशित ६ पुस २०७५, शुक्रबार | 2018-12-21 20:16:07